ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links ၂
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး Link များ The Best Policy of Myanmar Links ၂
The Voice 5-52 (Oct 27 2009 ထုတ်ဂျာနယ်)
စည်းဝိုင်းထဲကထွက်လို့ လာ..ဟဲ့ မယ်သီတာ..င့ါအစာဘဲ
အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ..ချတော့မလားကြည့်နေတာ နှစ် ၂၀ ကျော်ြ...
ဒီ ချစ်စရာ သားချင်းတွေ အတွက် ကျနော်တို့မသေခင်တခု...
ရွေးကောက်ပွဲတောင် မ၀င်ရသေး..ငွေအလွဲသုံးစားမှုနဲ့ က...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ရွေးစင် မိန့် ခွန်းများ
ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံ သတင်းစာ
နေပြည်တော်ရှိ စစ်ခေါင်းဆောင် သုံးဦး၏ လုံခြုံရေး တ...
အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်သတင်းများ
သာကူးတွေ ကို သတိထား
ဂျပန်နိုင်ငံသို့လာရောက်မည့် သိန်းစိန် အပေါ် ထုတ်ဖော...
မြန်မာဆိုတာ နအဖ ခြေထောက်အောက် တနေ့ တခြား ကြက်သရေတ...
အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စေ...
ရန်ကုန်မြို့ရှိ လူငယ်များအကြား အတူနေမှုများ ရှိနေ
မြန်မာ့အကြီးဆုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဇော်ဂျီယူနီကုဒ် သံ...
အဆိုးဆုံး အရာသာ ပြော..မြန်မာ မပါရင် လက်သီးနဲ့ အထို...
ဒီခွေး လက်ပေးဖို့ရှက်နေတယ်..
လက်ပါးစေ အေးလွင်၏ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်မှ အရှက်တရား...
မဲဆောက်ရှိ ကရင်ခေါင်းဆောင် နေအိမ်များကို ထိုင်းက ဝ...
ကျိန်စာသင့်နေသော မြန်မာ့ စွမ်းအင်.
စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ သီရိ လင်္ကာ...
၁၉၈၉ က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် သုံးရောင်ချယ်ရဲ့ ကဗ...
အနှိပ်စက်ခံ ပြည်သူတို့ ဘ၀
ခေါင်းဆောင်ကြီးတို့ သမီးနှစ်ဦး (ရှားပါးသမိုင်းဝင်...
ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများသို့
့အရှက်မဲ့ဘုရင်ရူးအဖွဲ့ ရဲ လေထိုးလေလျော်
Praying for Freedom of all political prisonors
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြေပုံအညွှန်းများ ပါဝင်သော GPS ထွက်ြ...
ဟဲလို..ပြောရတာလည်း မောလှပါပြီဗျ..ဘယ်မလည်း UN actio...
ပန်းသိန်းစိန် ကနေအမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ..ခွေးသေးပန်း ...
ထီး၊ နန်းနှင့် ပတ်သက်လျှင် အကြောမခံသူ ဗိုလ်ချုပ်ရူ...
လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အကြောင်...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ် Noteb...
တရုတ်ကို သစ်မှောင်ခို ခိုးထုတ်နေဆဲ၊ Global Witness...
ပြည်ဖျက်ရအောင် ကြံတာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုသူ သူရူ...
ငါ့ဖို့ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)
ကျောင်းသား တပ်မတော် ၏ လေ့လာရေး စာစဉ်
လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာ...
ဘဘတို့ ကရော ဒီလောက်တောင် သတ်ပုံပေါင်းတတ်ရဲ့လား..
U.S. delegation to visit Myanmar soon: official
မြန်မာနဲ့ရေပြဿနာ..
ခေါင်းမဲ့သူများ ဦးဆောင်တဲ့ တပ်မတော်လေ၏ မောင်းသူမဲ...
ဘဲဥပုပ်မှန်တော့မဲ့ မျက်ခွက်နဲ့ဘကြီးစိန်
ကဲ မခင်ဥမ္မာရေ..သာသာနာနာ.လေး နွှဲကြပါစို့ ဗျာ..
အာရုဏ်ဦးမှာ ကြာဖူး မဖူးတော့ မသိ။။ ဘုရင်ရူးတွေ..ရူ...
အကြံကုန် အိုက် နေတဲ့သူတွေ..အကြောင်ရိုက်နေတယ် သတိထာ...
ဗြဟ္မခေါင်း(ငတေဇ) MAI သို့ ရွေ့ လာခြင်း
ရန်ကုန်မြို့လယ် မြို့နယ်များတွင် ရေမလာ သဖြင့် လူအမ...
သူတို့ တွေဘဲ တမျိုးထပ်ထွင်နေပြန်ပြီ
မင်း ဖိနပ်ပျံ မကြောက်တတ်တော့.နောက်တချီသွားလိုက်ဦး...
အာဆီယံ လူထုအခြေပြု ညီလာခံ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြ...
လူထု ကိုယ်စားလှယ်ကြီးပါ ခင်ဗျား …
မွေးတဲ့နေ့ က အရေးမကြီးဘူးအမေ..မသေဖို့ က အရေးကြီးတယ...
မနိုင်တော့လည်း ဒီလိုပေါ့..မြန်မာ့ အားကစားစိတ်ဓါတ်ေ...
လိမ်တာများတော့ ဒို့ မယုံ။ ဒိုင်..လက်ရှောင် ဥပဒေကို...
အခြေခံ ပညာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ ဖွဲစည်း
လက်တစ်ဆုပ်စာ အာဏာရူးတစ်စုရဲ့ အ၀ီဇိ ငရဲသို့ သွားရာလ...
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ်ဆု၊ အိုဘားမား၊ ဒေါ်အောင်ဆန်း...
သူတို့ ကလွဲ ဘယ်သူဖြစ်ဦးမလည်း..
လူတန်းစားမညီမျှမှုနှင့် ယနေ့ ( န အ ဖ ) တို့ ပြောသေ...
နေနှစ်လုံးကြားက ပျက်လုလု ကမ္ဘာ..သန်းရွှေရေ ၀အောင်စား...
ရှေ့မှာ လက်ယပ်ခေါ်နေတဲ့ ဘ၀ပျက် ( မင်းရဲကျော်စွာ )
သစ္စာသတင်း ဂျာနယ် အောက်တိုဘာ ၂၀၀၉
ကိုမင်းကိုနိုင် (၄၇)နှစ်ပြည်မွေးနေ့ အမှတ်တရစာလွှာ
The Voiceစာစောင် (Oct 15 Issue)
ဒို့ အမေ ကိုလွှတ်
ရန်ကုန်မြို့ အိုင်တီ နည်းပညာ ပြပွဲ ဆိုတာ
ပေါင်သားပေါ် ဖက်ရှင်များကြောင့် သတင်း အချက်အလက် နည်...
၈၉ နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာပေဟောပြော...
တို မှ ကြိုက်တာ..ဘဘတို့ ခေတ်..
လီဒိုလမ်းမ (Stilwell Road ) အကြောင်း.(1945)
RFA နှင့် NCUB အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးမောင်မောင်...
သွေးအေးနေတဲ့သူ...ဆူနိုးလာအောင် မော်နီတာခန့် အပ်ခြင...
ကျတော်တို့ ၏ ရွှေနိုင်ငံ..ပြာပုံ တဖြစ်လဲရခြင်း၏ အြေ...
Generation Wave(မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး)က ဆ...
မျိုးဆက်သစ် လူငယ် အစည်းအရုံး မှ လှုပ်ရှားမှု
အိန္ဒိယရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များရဲ့ ရှေ့ ရေးအလားအလာ
Sen. Jim Webb နဲ့ CNN အင်တာဗျူး
သွပ်ပြားတို့ ကို အားပေးနော် အဟင့်..အဟင့်
အပစ်ရပ် SSA နာယက လုပ်ကြံခံရဟု အရာရှိ အသိုင်းအ၀ိုင်...
ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားတဲ့နအဖစစ်သား
မတရား စွပ်စွဲ ထောင်ချခံရခြင်း
ငခုံးမတစ်ကောင်ဘဲ အဆုံးခံမလား တစ်လှေလုံးဘဲ အငတ်ခံမလ...
ကဗျာဆရာ ကိုစောဝေကို Hellman/Hammett ဆုချီးမြှင့်
နအဖ လေသူရဲတို့ ၏ သချိင်္ုင်းဂူ...
သူတောင်းစား နအဖ စစ်တပ် နှင့် အမျိုးယုတ် DKBA တို့ေ...
အောက်တိုဘာ (၁၃)၂၀၀၉ သတင်းများ
မနက်ဖြန် ကိုညီညီအောင်အား ရုံးတင်မည်။..။
တိုင်းမှူးအမိန့်အရ ရွာမီးရှို့မှု၌ ဓါးစားခံအဖြစ် စကခမ...
VOICE OF BURMA (အောက်တိုဘာ ၁၁ ၂၀၀၉)
အောက်တိုဘာ (၁၂)၂၀၀၉ သတင်းများ
နအဖ အာဏာရူးကြီး သန်းရွှေပုံ ကာတွန်းထဲမှ ပုံရိပ်လွှာမ...
ဗကသ များ အဖွဲ့ချုပ်(ယာယီ) မှ လှုပ်ရှားမှု
နာဂစ်နဲ့ လူသိန်းကျော် ရင်းထားရတဲ့ ဒီအခြေခံဥပဒေ..အသ...
အောင်ကြည်ရေ မင်းဘဲတွေ့ ..ငါတော့ ကြောက်တယ်..
အောက်တိုဘာ (၁၀)၂၀၀၉ သတင်းများ
လင်ယူ ပက်စက်သောခင်ရီ မောင်အူးပေးခဲ့သော ဗိုက်တစ်လုံ...
အိုဘာမားလည်း အခု ဒေါ်စု အဆင့်ကို မှီသွားပြီ..
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ရန် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆော...
ရဲချုပ်၏သတင်းဟောင်း စစ်အစိုးရသတင်းစာတွင် လိမ်လည်ဖေ...
တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူ ...
အိုဘာမားက သိန်းစိန် မျက်နှာဘယ်လောက်ပြောင်သလည်း ကြည...
ဂျပန်နိုင်ငံက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့...
အောက်တိုဘာ (၈)၂၀၀၉ သတင်းများ
GW ၏ နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်အစီရင်ခံစာ
Than Shwe had been expelled from Buddhism
ကိုဘိုကြည် လူ့အခွင့်အရေး ခုခံ ကာကွယ်သူဆုရရှိ
ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်း တက်သည်ဟု စွပ်စွဲကာ သံဃာတော်အချု...
တွေ့ ရင် သတင်းပေးကြပါ
အောက်တိုဘာ (၅)၂၀၀၉ သတင်းများ
အာဏာပိုင်ဆိုသူများ၏ အကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးမှူအပေါ် ဥပဒေရေ...
ကြေးမုံသတင်းစာပါ ၂၀၁၀ အတွက် လက်ရှိပူးတွဲချန်ပီယံ န...
သန္ဓေယုတ်ကောင် သန်းရွှေ ခွေးများ လုပ်ရပ်
မေ့လောက်မှ တခါပြန်ပေါ်လာတဲ့ အောင်ကြည်..
လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်း ဒို့ ကျောင်းသားတွေ...
အောက်တိုဘာ (၄)၂၀၀၉ သတင်းများ
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ ချူ...
ပြည်သူ့ လွှတ်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှု ကွန်ယက်ကြေငြာချက...
ရာဇဝင်ရိုင်း ဖွတ်သမိုင်း | ကိုစိုး(နာဂါစကီ)
Aung San Suu Kyi Street Art : GLOBAL GRAPHICA
ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်သပိတ် အထမြောက်ဟု သံဃာ့တပ်ပေါင်းစ...
ဗကသ(ယာယီ)၏ ပြည်သူလူထုသို့ပန်ကြားချက် ၅ ချက်
ကျောင်းသားဆို ဒူးတုန်အောင် ကြောက်
ပြည်သူ့စစ်ထံမှ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လက်နက်ခဲယမ်းများ ...
အစိမ်းမဟုတ်သော ဗကသ ၏ ရွှေဝါရောင်
ဘယ်နဲ့ လည်း..နင့်အဖေ တရုတ်ကြီး။ နအဖကို ချစ်လွန်းလိ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု၏ သတင်းလွှာ